Guddoomiyaha Fifa Gianni Infantino oo lagu arkay liiska Panama - BBC Somali
Guddoomiyaha Fifa Gianni Infantino oo lagu arkay liiska Panama
Waraaqo kale oo laga helay sharikadda sharciga ee reer Panama ayaa muujinaya in Gianni Infantino, oo ah madaxa cusub ee xiriirka kubbadda cagta adduunka ee Fifa uu saxiixay qandaraas uu la galay laba nin oo ganacsato ah oo markii dambe lagu soo oogay dacwad laaluush ah.
Isagoo hore uga mid ahaan jiray saraakiisha xiriirka kubbadda cagta ee Yurub, UEFA, Mr Infantino waxaa uu saxiixay qandaraas ku saabsan xuquuqda television-ada inay baahiyaan ciyaaraha horyaalka Yurub ee Champions League.
Waxaa xuquuqdaas laga iibiyay laba nin oo ganacsato ah kuwaas oo isla markiiba xuquuqdii television-ada ku iibiyay sicir saddex jibbaar ka badan intii ay ka bixiyeen.
Ma jirto wax muujinaya inuu khalad sameeyay Mr Infantino. Uefa markii hore way beenisay inay wax heshiis ah la gashay ganacsatadaas, Hugo iyo Mariano Jinkis, oo iyagu wajahaya eedo ku saabsan qandaraasyo kale oo televisionno ah oo Maraykanka gudihiisa looga haysto.
Uefa waxay sheegtay in qandaraasyada si sax ah looga iibiyay qofkii tartanka ugu sarreeyay.